Myanmar: Burma Democratic Concern (BDC) unequivocally deno… | Flickr
Burma Democratic Concern (BDC) By: Burma Democratic Concern (BDC)
Myanmar: Burma Democratic Concern (BDC) unequivocally denounces police brutalities cracking down on students' protests
Burma Democratic Concern (BDC) unequivocally denounces police brutalities cracking down on students' protest in Latpantann on 10 March 2015 and other protests around Burma by using excessive force, by conducting unethically and unprofessionally and by using thugs. Especially, the police appeared to have taken drugs when they are attacking student protesters.
•by attacking an ambulance car which clearly shown red-cross emblem as well as attacking red-cross personnel who are attending injured students
•in one video file uploaded on facebook clearly showingastudent was arrested and escorted by riot police and then from opposite directionagroup of riot police (approximately 20) run charging at him with batons deliberately which is clearly showing aggression of the riot police and motive of the government!
•in one video file uploaded on facebook clearly showingagroup of riot police deliberately and aggressively attacking on the vehicle which is used by student protesters
•in one video file uploaded on facebook clearly showingagroup of riot police kicking Buddhist monk from the back and other several riot police repeatedly beating him with batons
•attacking media journalists and even do not allow them to hold cameras and/or batons wielding riot police chase charging them clearly demonstrate government aggression towards media freedom
•by using government-sponsored plain-clothed thugs wearing red hand-bands written in Burmese "Duty" to attack arresting student protestors.
By seeing above evidences of Burmese polices' aggressions, brutalities, using excessive force, we believe, it is clearly highlighting that EU should train more on Burmese police force not to be aggressive toward public but to be professional one, not to commit brutalities but to exercise ultimate restraint, not to use excessive force but to use force as the least and the last resource.
Furthermore, recent police brutalities clearly highlighting that Burma should establish permanent "The Independent Police Complaints Commission" comprises of with respectable personnel and professionals who will be handling public's concerns and complains over police brutalities so as to prosecute whosoever committing crimes.
Moreover, recent government use of colonial era laws dated back as early as 1900s to crack down on students' protests clearly showing that Burma should establish permanent "The Independent Law Reviewing Commission" so as to review, repeal and replace draconian laws which can be manipulated to use oppressing public with the democratic laws.
ကျွန်ပ်တို့ Burma Democratic Concern (BDC) အနေဖြင့် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် လက်ပံတန်းမြို့ရှိ ပင်မ ကျောင်းသားသပိတ် ရှိ ဆန္ဒပြကျောင်းသားများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နံပါတ်တုတ်များနှင့် ၀င်ရောက် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း နှင့် ကျောင်းသားသပိတ် ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရပ်သား စွမ်းအားရှင် များ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း အပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ် ချပါသည်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေး သုံးစွဲထား သည်ဟု သံသယရှိ ဖွယ်ရှိသော ရဲများက --
•လူနာတင်ကားမှန်း သိပါလျှက် ကြက်ခြေနီဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားတာ တွေ့ပါလျှက် ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှက် ခြင်း
•ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးက မလွှဲမရှောင်သာ၍ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းရသည်ဟု ပြောဆိုထား သော်လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရပြီး ပြန်လည်ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို နှစ်ဆယ်ဦးထက် မနည်းသည့် ရဲများက နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ဝိုင်းရိုက် ခြင်း ၊
•ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွင်းဖို့ အတွက် အသက်မရှိတဲ့ကားကို သဲကြီးမဲကြီး အညှိူးတကြီး ပရမ်းပဒါဖျက်ဆီးပြစ် ခြင်း ၊
•ဗီဒီယိုဖိုင်တွင်ဘုန်းကြီးခေါင်းကိုဝိုင်းရိုက်နောက်ကနေ ပြေးစောင့်ကန်နေကြ ခြင်း ၊
•သတင်းထောက်များ ကို ကင်မရာကိုင်ခွင့်မပေး ဘဲ သတင်းထောက်များ ကိုပါ နောက်ကနေလိုက်ရိုက်ခြင်း ၊
•တာဝန် ဆိုသောလက်ပတ် ပတ်ထားသော အရပ်သား စွမ်းအားရှင် တွေသုံးပြီး ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို အကြမ်းဖက် နိမ်နင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် တာဝန်ယူမူ ၊ တာဝန်ခံမူ ၊ အမိန့်ပေးသူ ၊ အမိန့်ပေးခံရသူ ဆက်စပ်မူ အပြန်အလှန် ချိတ်စပ် မူကြောင့် အီးယူ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ များအပြင် ဆက်စပ်တာဝန်ရှိသူများအားလုံး - ဥပမာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မှအစ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် များအလယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမူးများအဆုံး အားလုံးကို ပြည်သူများ၏ရပိုင်ခွင့် ၊ လူ့အခွင့့််အရေး ၊ အကြမ်းမဖက်ရန် ၊ မရက်စက်မကြမ်း ကြုတ်ရန် ၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးမပြုရန် သင်တန်းများ ပိုမို သင်ကြားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။